Ahoana no fomba hialako amin'ny fitaovana KMS? - Faq
Tena > Faq > Fitaovana fanesorana Kms - vahaolana azo ampiharina
Fitaovana fanesorana Kms - vahaolana azo ampiharina
Ahoana no fomba hialako amin'ny fitaovana KMS?
roa. esoryAutoKMS toy ny fampiharana hafa
Ao amin'ny bara fitadiavana, soraty ny Control and open Control Panel.
Ao amin'ny fijerin'ny sokajy, kitiho nyesoryprograma iray.
Mitadiava AutoKMS aryesoryizany.
esoryireo fisie fampidinana alaina.
Tadiavo izao ao amin'ny lisitra ny Control Panel ary sokafy izany Control Panel Ho hitanao ity resaka ity Ary sokafanao ny tontonana ankavanan'ny lakile havanana mitady ny kinova Despot mandoa Tsindrio ny bokotra ary safidio ny Change in Data Data Field Type ary tehirizo izany mahafatifaty esory ny mari-drano windows 10 maharitra mandrakizay hahafahanao mampihena ny zava-drehetra amin'ireto fisoratana anarana ireto ary manidy ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny dingana manaraka tsy maintsy ampidirintsika sy havaozina ny lakilen'ny toro-lalana mba hanokatra ny menio fikarohana karazana CMD tsindrio eo amin'ny baiko avy hatrany ary safidio ho mpitantana Ankehitriny dia mandefa baiko eto izahay izay manavao ny habaky ny vondrona typdgpupdate space / diso ary tsindrio hiditra izay novainay ny editor registre isrefresh Delete Enable Windows 10 Watermark Permanently Now open the Drum again and type regedit and open the registry editor here we have not seek Ny fisoratana anarana SV SVC Tsindrio izao ny SV Aza manitatra ny fisoratana anarana SVC Ao amin'ny tontonana ankavanana dia ho hitanao ny filaharana fanombohana Tsindrio eo amin'ny Start ary safidio ny Modify Delete W indows 10 Avelao ny watermarks haharitra Ankehitriny ny sanda amin'ny fanovana efatra izao amin'ny fisoratana anarana mitovy ihany dia tsindrio any ho any amin'ny faritra foana misafidiana vaovao ary avy eo ny lakilen'ny ranom-boankazo dia apetraho izao ny lakilen'ny kmsin amin'ny faritra havanana sokafy lakile mahazatra ary apetraho ny lanjan'ny kms underscore hanakatona ny tonian-dahatsoratry ny fisoratana anarana Zava-dehibe ny fanakatonana ny tonian-dahatsoratra mba hisian'ny fiovana rehefa manavao ny GPpress ny lakilen'ny Windows miampy Eny key ary sokafy ny menio fikarohana, ampidiro CMD ary sokafy ny command prompt rehefa mpitantana ianao manokatra ny baiko avy hatrany rehefa miditra ny administratera dia mila manavao ny GP indray isika ka sokafy ny command prompt amin'ny maha administratera anao ary andao ilay baiko mitovy gpupdate forceo tsy hanidy command now grow here Esory Activate Windows 10 watermark Maharitra ny fizotran'ny dingana manomboka ny fisafidianana Safidy fotoana eo amin'ny ambany ankavao Fanavaozana sy fiarovana izao eo amin'ny tsindrio ankavia amin'ny fampahavitrihana izao dia hitanao fa tsy miasa ny rafitrao, mila mampihetsika ity zavatra ity isika aorian'ny comp mamela ny dingana ataontsika dia hojerentsika ity efijery ity mandritra ny fotoana fohy avy amin'ity efijery ity, kopia ny fanontana windows takiana amin'izao fotoana izao amin'ny tranga misy ahy raha ny windows 10 pro ary mety ho sarotra aminao izao aorian'ny andefasako azy dia handeha aho asehoy anao ny lakilen'ny fampidirana ms voavidy ho an'ny kinova rehetra navoaka mivantana avy amin'ny kms ofisialy ireo fanalahidy ireo dia ao amin'ny tranokala microsoft ihany koa ary koa amin'ny siansa fiara finday Ireto ny lakilen'ny KMS ho an'ny kinova Windows rehetra ajanony fotsiny ny lahatsoratra ary adikao ny lakilanao kms ho an'ny notepad Afindraiko mivantana avy any amin'ny Arnold Pad ny edisiona ho an'ny Windows 10Pro Edition.
Alefaso izao mankany amin'ny Command Prompt Type commando esory ny Windows 10 Enable Watermark Press Enter ary andraso segondra vitsy ny hafatra Midoboka ao amin'i Mom Press Enter ianao ary miandry ny hafatra izay andehananao amin'ity manaraka ity dia ny CommandYou press ENTER ary miandry vitsivitsy segondra ny hafatra dia haseho indray ianao dia haseho hafatra mahomby Ankehitriny, dingana iray manan-danja kokoa no mijanona ao amin'ilay riandrano namadika, fa alohan'ny handehanantsika any dia hamelombelona fotsiny eo amin'ny birao. Ho hitanao fa tsy eo intsony ny hafatra, fa mbola hahita hafatra kely ho an'ny kinova fananganana ianao. Ankehitriny ianao dia afaka mandray azy ireo avy amin'ny mpampiasa Rupp hkey window amin'izao fotoana izao ny control panelclick amin'ity tsindry popdouble ity eo amin'ny faritra manan-danja amin'ny kinova desktop ankehitriny ovay ho lasa zero Izao dia tsy maintsy mihodina ny kaomandy gpupdate isika amin'ny fotoana farany satria nanova ny fisoratana anarana dia Command Prompt izahay ankehitriny toy ny AdministratorTV Updates avy eo / diso ary tsindrio ny Enteryounow hamelombelona ny birao ary jereo ny fiovana, eo izao ny hafatra, mandehana fotsiny amin'ny Control Panel ary jereo raha navadika ny fikandranao na tsia.
kaody hadisoana 0x800700d
Misaotra anao nijery an'ity lahatsoratra ity dia mamporisika anao aho hanandrana rindrambaiko manatsara ny onja ho an'ny solo-sainanao araka ny nolazaiko fa mahafinaritra ny mampiasa rehefa mampiasa an'ity solosaina kanto mahafinaritra ity ianao mba hampisongadinan'ny zavatra ataonao ny zavatra solo-sainao. Tsy miasa ivelan'ny Internet ihany io fa amin'ny maody an-tserasera koa rehefa mikaroka sy misidina zavatra an-tserasera ianao, miaraka amina motera fikarohana mihetsika mahafinaritra ity motera fikarohana ity dia natao mba hampandeha tsara kokoa ny fikarohana ataonao raha tsy mitovy amin'ireo motera fikarohana nentim-paharazana miditra anaty fitetezana. maody Ataony anaty onjampeo Ultrasmoother ny sarimiaina mahatsikaiky amin'ny lohataona mba hahatonga azy io ho tsara tarehy kokoa noho ianao mahazo ny UI azo ekena izay onja noho ny afo, mahazo ny tananao ianao
Azo antoka ve ny fitaovan'ny kms?
KMSPico dia tanterakaMAMPIDI-DOZASYfitaovana azo antokaizay ampiasaina hampavitrika ny vokatra Microsoft toa ny Windows sy Office. nyFitaovanadia efa notsapainay talohan'ny nandefasana azy tao amin'ny tranonkalantsika. Miaraka amin'ny fanampian'ity mahagaga ityFitaovana, ny mpampiasa dia afaka mampandeha ny iray amin'ireo vokatra na dia tsy mividy lakile serial aza avy amin'i Microsoft.
- Ka ny sasantsasany aminareo dia namela ny heviny tamin'ny lahatsoratra farany 'Fampahafantarana ny CPU AMD's Threadripper 2 2990WX' amin'ny alàlan'ny overlay eo amin'ny zoro ambany ambany amin'ny efijery izay nangataka ahy hampihetsika ny Windows.
nefa izy rehetra dia nanana zavatra iraisana. Tsy azonao an-tsaina ny antony mahatonga ny fikambanana toa an'i Linus Media Group, iray manana mpanohana toa an'i CableMod, izay manana configurable RGB backplate safidy izao ny configurator izay afaka manatsara ny endrik'ireo GPU sy SSD misy anao amin'ny Fusion, Mystic Light Sync, ary ny RGB azy manokana. Kit avy amin'ny CableMods. Ary afaka mahita izany amin'ny rohy etsy ambany ianao.
Maninona ny fikambanana toa ny Linus Media Group miaraka amin'ny mpanohana toa an'io no mila mitahiry vola zato etsy sy eroa amin'ny kopian'ny Windows ara-dalàna. Fa maninona ary raha tsy miresaka an'izany isika? (Hira mahafinaritra) Ka andao aloha hanomboka amin'ny fahazoana fahazoan-dàlana Windows avy amin'ny stack, ny tsara kokoa izay tsy ampiasain'i Denis. Raha ny tokony ho izy, azoko io tao amin'ny NCIX, noho izany dia mazava fa tsy nivoaka aho ary nividy azy ireo satria izany no fomba ofisialy amin'ny fametrahana Windows amin'ny PC.
Amin'ity tranga ity dia ny toeram-pitsapako manokana no ananako eto amin'ny lisansa birao mba hamoronana ity lahatsoratra ity, izay mahasosotra satria izy io dia fahazoan-dàlana Windows 10 Pro, saingy zava-dehibe ho ahy ny mampahafantatra anao ny hevitro. ny fomba hampavitrika ny Windows, ary ny fomba mety hiasa amin'ny dabilio fitsapana, ary he, avy eo isika. Activation Windows 10 Pro Windows dia alefa amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana nomerika. Eny, ndao hatao hoe miasa amin'ny zavatra toy ny fijerena karatra sary aho.
Ka mazàna amin'ireto tranga ireto dia vonona ny hametraka ny karatra sary. Ary rehefa afaka izany, dia nihazakazaka ny benchmarks tamin'ny karatra iray izahay, nanidy ny rafitra izahay ary nifindra tamin'ny iray vaovao. Misy olana kely fotsiny amin'izany.
Ireo mpizara fampandehanana an'i Microsoft dia mamorona mpamaritra tokana ho an'ny PC miorina amin'ny fitaovana napetraka eo amboniny. Azonao atao ny mahita, tafavoaka velona tokoa isika tamin'ny fifanakalozana karatra sary eto, fa rehefa be ny zavatra niova, dia andao atao hoe miovaova hatrany ny karatra sary, tianao ho hita ny rafitra mihazakazaka amin'ny antsasaky ny fahatsiarovana, ampifamadinao ny CPU, na ratsy kokoa, ianao dia tsy maintsy swap ny motherboard, na hanandrana sehatra hafa na ho toy ny fepetra troubleshooting, ny mety hitranga dia afaka miova ity mpamaritra ity ary tsy azoko tsara hoe ahoana ny hamaritana azy rehefa ova izy io fa raha toa ka miova izany mety mangataka amin'ny Windows izy io mba hanajanonana azy io, efa nojerentsika io talohan'ny nanombohantsika ary tsy afaka mandeha io. Ka dia mampihomehy tokoa ity satria ity iray ity aza dia efa nandeha lavitra mihitsy aho mba hahafahako mamindra ny boot drive izay ampiasaiko, nefa mbola nahita zavatra momba ny ID momba ny fitaovana ary nahavita nifindra ny fahazoan-dàlana.
Saingy ny tiana holazaina dia hiverina aminao io fotoana io amin'ny fotoana iray. Ankehitriny, tamin'ny andro taloha, ary heveriko fa fito na valo taona lasa izay ny vahaolana amin'ny fangatahana fampahavitrihana dia ny fiantsoana ny laharam-pahefana fampandehanana an'i Microsoft, andramo ny fizotran'ny famerenana mandeha ho azy, nahazo io lalan-diso io indroa, noho izany dia toa tetikasa 10 minitra io. avy eo tsindrio bokotra iray mba hapetraka amin'ny solontena iray, hazavao fa nosoloinao ny sasany amin'ireo fitaovanao ary mila mamerina ny laisinao ianao. Saingy nandany fotoana izany ary tsy zavatra azo antoka akory.
Raha ny marina dia tadidiko fa nifamaly tamin'ny solontena iray izay nilaza tamiko fa lany ny activitation-ko momba ny tranga fampiasako, izay misy ny fanovana tsy tapaka ny fitaovana entina hanandramana azy. Mila mividy fahazoan-dàlana vaovao fotsiny aho isaky ny asaina mamela ny watermark Windows. Ary ny tiako holazaina dia nilaza izy fa tsy misy azony atao ary tamin'ny fotoana iray dia nandao (tsy fantatra aho) fa resaka tsy dia tsara loatra izany.
Fa ny tiako holazaina dia, na dia marina aza izy, ambanin'ny fehezantenin'i Microsoft momba ny fahazoan-dàlana, marina ihany koa aho. Tsy ampoizina ny hividy fahazoan-dàlana vaovao ho an'ny Windows isaky ny mivoaka ny fitaovana vaovao ary misy ifandraisany amin'ny toeram-pitsapana. Soa ihany fa tamin'izany fotoana izany dia nahazo famandrihana tamin'ny TechNet, serivisy famandrihana rindrambaiko mamela anao hampiasa rindrambaiko Microsoft be dia be amin'ny tontolo tsy ara-barotra miaraka amina activations tsy voafetra - ny fikatsahana tombom-barotra nataoko tamin'ireto fitsapana ireto, farafaharatsiny. tsara izany mandra-pikaton'ny TechNet tamin'ny 2013.
Ankehitriny ny fomba ara-dalàna vaovao hamindrana ny fahazoan-dàlanao dia ny famahana ny olana amin'ny fivezivezena. Azonao atao ny mahita ny zavatra nataoko izao, nampifandraisiko amin'ny kaonty Microsoft ny fahazoan-dàlanay nomerika. Ka tsy mbola nanao an'izany aho teo aloha, fa raha ny teôlôjia dia tokony ho vitantsika ny mamadika ny fiara ary miditra ao amin'ny menio fanovana ary mamindra ny fahazoan-dàlana mankany amin'ny solosaina hafa, izay tena milay ary tsara lavitra noho ilay rafitra taloha.
Ka andao andramana izany, sa tsy izany? Ka tsy hasehonay anao ny tena fiasan'izy io rehefa miasa amin'ny fomba mistery ireo mpizara fampidirana Microsoft, fa amin'ny ankapobeny dia toa tsy misy fanaintainana izany. Tokony hisy ny fangatahana hamindra ny licence-nao, blah, blah, bla, bla, bla, sns, zavatra, eny, tsy manana pikantsary ihany koa izy ireo.
Inona izany? Na izany na tsy izany, amin'ny fotoana sasany, na inona na inona famindranao ny fahazoan-dàlana, dia milaza ny voambolana fa ho lany fampandehanana ianao amin'ny farany. Saingy miaraka amin'io fomba io, ary angamba ny sasany amin'ireo lakilen'ny $ 20 Windows mora vidy azonao alaina avy amin'ny loharanom-barotra an-tserasera amin'ny Internet, tsy tokony hisy ny fanamarinana fa mamela ny watermark Windows, sa tsy izany? Toy ny tokony hanaikitra ny bala fotsiny isika ary handalo izany dingana izany. Ankoatra ny olana iray.
Ireto lakile 20 $ novidinao an-tserasera ireto dia tsy natao ho an'i Amerika Avaratra na ny tsena Eoropeana US ka tsy tena ara-dalàna izy ireo. Ka raha esorinao ny rafitry ny rafitrao dia soraty ilay tsipika ary manampy anao hatory amin'ny alina izany dia tsara izany. Saingy ny zavatra momba ny rindrambaiko dia ny fehezan-dalàna avy amin'ny EULA izay novakianao an'ity zavatra voalohany ity dia tsy miankina amin'ny fampandrenesana fanalahidy na tsia amin'ny serivera Microsoft.
Ohatra, ny Windows 10 VM izay ampiasako ho an'ny lavitra dia manitsakitsaka - nanangana fidirana ho an'ny iray amin'ireo mpiasanay ivelan'ny tranokalanay aho, ara-teknika mifanohitra amin'ny fahazoan-dàlana Microsoft. Omaly aho vao nahalala rehefa nanomana an'ity lahatsoratra ity aho. Windows 10 mahazatra dia mety tsy ampiasaina amin'ny fidirana lavitra fotsiny.
Arakaraka ny ahafantaranao, marina? Raha manana sakaiza manana fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny volavolan-dalàna ianao na ny lakilen'ny tranokala dia tsy ara-dalàna koa. Hampihetsi-po ho anao izy io ary hanaisotra ny mari-drano, saingy mbola piraty rindrambaiko io na dia fomba maimaim-poana ho anay aza mba hahazoana antoka fa tsy hiseho intsony ao amin'ny lahatsoratray ity mari-drano ity fa mety misy rindrambaiko tsena volondavenona na fanitsakitsahana lisansa ihany. Ka ho an'ny tranga fampiasana izay tsy tohanana, na aiza na aiza misy anay, dia mampiasa dabilio fitsapana izahay hanamarinana ireo fitaovana, ny vahaolana tsara indrindra hitanay dia ny hitazomana ny rindrambaiko ho kilemaina mandrakizay.
Ka ity ny mpampiditra mahazatra, ary mety mbola tsy tsikaritranao izany taloha, fa i Microsoft tena manana fomba namboarina hampandehanana Windows ho an'ny tanjona fitiliana eto. Miankina amin'ny kinova Windows, dia hiovaova ny fotoana anananao. Rehefa manao izany anefa isika, tsindrio fotsiny ny Skip fa tsy hiditra amin'ny lakilen'ny vokatra, ny fametrahana Windows dia hiroso tahaka ny mahazatra.
Mbola hahazo fanavaozam-baovao Windows isika, tsy hisy fiantraikany amin'ny fomba rehetra ny fahombiazan'ny fitaovana, tsy mila mandany fotoana misimisy ihany amin'ny resaka hadalana isika. Ary ho an'ny anjarako, matory tsara amin'ny alina aho, rehefa fantatro ny fipetrakako ny lakilen'i Windows mihoatra ny voarakotra eto ambany noho ireo rigs fitiliana nomenay. Ka raha hitanao ny fantsom-pahavitrihantsika amin'ny iray amin'ireo lahatsoratray dia ho azonao ny antony.
Ny fisorohana fotsiny ny antontan-taratasy dia tsy misy ifandraisany amin'ny fitsitsiana vola amin'ny Windows 10 Raha te-hihary vola ianao, ny SoundCore Flare + Anker ho avy dia tsy hanampy anao hitahiry vola satria mety te hividy azy ianao. Izy io dia mpandahateny tsy misy tariby izay mamela anao hanatsara ny habakabaka amin'ny fipetrahany feo 360 degre, azonao atao ny manamboatra roa amin'ireo mpandahateny ireo ho an'ny feo stereo sy ny seho tarihin-dry zareo izay mandeha amin'ny mozikao Ny isa IPX-7 dia mitazona azy nankalazaina ny antoko pisinina ary mahazaka mora foana ny orana sy ny orana ary miditra anaty rano mihitsy aza. Ny bateria mahazaka lehibe dia haharitra ny mozikao mandritra ny 20 ora ary afaka manampy amin'ny famandrihana ny fitaovanao amin'ny fotoana iray aza.
Zahao ny rohy etsy ambany raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity mpandahateny ity ary ahazoana tombony hahazoana iray. Misaotra anao nijery ireo olona. Raha tsy tianao ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny manindry an'ity bokotra ity fa raha tianao izy dia andao hisoratra anarana na handinika hoe aiza no hividianana ireo zavatra nasongadinay tao amin'ilay rohy tao amin'ilay famaritana ny lahatsoratra.
Azo antoka, zahao ny Windows 10. Na dia any ambany any aza ianao dia afaka mijery ny fivarotanay, ny shirt dia misy lobaka mahafinaritra toa ity ary ny forum misy anay. Tokony handray anjara tokoa ianao.
Azoko esorina ve ny KMSPico aorian'ny fampandehanana?
Matetika isika no mahita olona manontany hoe: “Azoko esorina ve ny KMSpico aorian'ny fampiatoanaWindows 10? ” Ny valiny dia hoe: “Eny, ianaoafaka. ” Raha ny marina, ianaoafaka manafoana ny KMSpico aorian'ny fampiatoanamisy vokatra an'ny Microsoft Corporation.
Virosy ve ny Kmsautonet?
Raha malware izany naviriosymety mihazakazaka any aoriana izy io. Ny extension .exe an'nyKMSAuto Net.exe rakitra dia manondro fa rakitra azo ampiharina ho an'ny Windows Operating System toy ny Windows XP, Windows 7, Windows 8, ary Windows 10. Malware aryvirosyampitaina amin'ny alàlan'ny fisie exe ihany koa.
Ahoana ny fomba fanesorana ireo log an'ny fanonganana malware navoakan'ny mpikatroka KMS?
Zava-dehibe: Aza asiana RogueKiller manala zavatra hita. Tsindrio ny tabilao HISTORY arahin'ny Scan Reports. Tsindrio indroa ny log scan. Tsindrio Export TXT, mampidira filename ary tahirizo ao amin'ny Desktop anao ilay fisie. Azafady apetaho amin'ny valinteninao manaraka ity rakitra ity.
Ahoana ny fanesorana ny serivisy mpampiantrano KMS amin'ny Windows?
Saingy Googling, Yahooing na Binging ity lohahevitra ity dia mahazo be dia be ny hits (ny sasany amin'ireny dia ny fanesorana malware) izay manondro ny fanesorana ny serivisy mpampiantrano KMS amin'ny milina Windows mila mampiasa zavatra antsoina hoe 'mKMSact.exe'. Inona izany, fitaovana Microsoft tsy misy antontan-taratasy, ary aiza no ahazoako kinova Win2k8r2 tsy misy malware?
Misy baiko hamafana ny birao KMS?
Raha mandeha ny baiko raha tsy misy ny ID fampandehanana Office (bfe7a195-4f8f-4f0b-a622-cf13c7d16864), esorina avokoa ny lakilen'ny vokatra napetraka, ao anatin'izany ireo ho an'ny Windows. Ataovy indray ity baiko manaraka ity hijerena ny satan'ny mpampiantrano Office KMS:
Misy fomba manala ny KMS ve?
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, Google Chrome sy mpizaha Internet hafa miaraka amina fiambenana mandeha ho azy dia hanakana ity programa ity sy ireo programa mifandray aminy tsy ho sintomin'ny mpampiasa amin'ny tanana.